ထိုင်းလူသတ်မှု DNA တူညီ
ထိုင်းနိုင်ငံ ခိုထောင်းကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ မြန်မာနှစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ခိုတောင်းကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ယောက်အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့ အမှုကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ လူသေ အလောင်းကတွေ့ရတဲ့ DNAနဲ့ တရားခံတွေရဲ့DNA တွေတူ ညီနေတာတွေ့ရှိရကြောင်း ရဲအရာ ရှိနှစ်ဦးက ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကော့စမွေခရိုင် တရားရုံးမှာ မနေ့က စစ်ဆေးခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှုကို လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးကွန်ယက် MWRN အဖွဲ့က ဦးစိန်ဌေးစန်း က RFA ကို အခုလို ပြောဆို ပါတယ်။
"မနက်ပိုင်းကတော့ ရဲမှုခင်းသိပ္ပံက DNA စစ်ရတဲ့ အရာရှိပေါ့နော် ညနေပိုင်းကတော့ ရဲဆေးရုံက ဓါတ်ခွဲခန်းက CIA စစ်ရတဲ့တစ်ယောက် ဆိုတော့ မနက်ပိုင်းမှာက ဒီ ကလေးသုံးယောက်ရဲ့ဆေးလိပ်တိုကနေရတဲ့ DNA နောက်ပြီး ဒီကလေး သုံးယောက်ရဲ့ DNA တွေ အဲ့ဒါတွေကို စစ်ရတဲ့ ရဲပေါ့နော် ညနေပိုင်းမှာကြတော့ ဒီ အလောင်းကနေ ပြီးတော့ စစ်ရတဲ့ရဲပေါ့နော် သူတို့ရဲ့ အပြောအရကတော့ အလောင်းမှာတွေ့တဲ့ DNA နဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ DNA ကတော့ တူတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးစွဲပြီးတော့ ပြောသွား တာပေါ့ ဒီဟာကိုတော့ ပြန်ပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာ ရှင်တွေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းရမှာပေါ့နော်"
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားခံရှေ့နေတွေဖက်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး မှုခင်း သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာဖွန်ထစ်ကို တရားရုံးမှာ သက်သေအဖြစ် တင်ပြခွင့်ပြု ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ရာ တရားရုံးက ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမှုကိုလာမည့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လူသတ်မှုနဲ့ ရုံးတင်စစ်ဆေးနေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုထောင်းကျွန်း လူသတ်မှုကိစ္စ စုံစမ်းရေးကော်မတီ သတင်းစာ ရှင်းလင်း
ခိုထောင်းကျွန်း လူသတ်မှု ထိုင်း တရားရုံး စတင်စစ်ဆေး
မြန်မာ ၂ ဦး လူသတ်မှု ကျူးလွန်ကြောင်း သက်သေ ထင်ရှားလို့ ဗြိတိန်မိသားစုပြောဆို
ခိုထောင်းကျွန်းလူသတ်မှု မြန်မာ လူငယ်နှစ်ဦးကို ကော့စမွီတရားရုံး မှာ တရားစွဲဆို
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖော်ထုတ်ရေး ကမ္ဘာကျော် စကော့တလန်ယာ့ဒ် စုံထောက်အဖွဲ့ကို စေလွှတ်တော့ မည်
လေ့လာသူအဖြစ်သာ ဗြိတိန် ရဲတွေကို သဘောတူခဲ့ တာလို့ ပရာယွတ် ပြော
ခိုတောင်းကျွန်း လူသတ်မှု ဗြိတိန်ပါဝင်စစ်ဆေးဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သဘောတူ၊ လန်ဒန်မှာဆန္ဒပြ
ရာဇဝတ်မှုတွေ များပြားလာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု အောင်ဝင်းထွန်း ထွက်ဆိုချက်အကြောင်း မေးမြန်းချက်
တောင်ကြီး GE တပ်က လေးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု
Don't just blame Thai police. They are the same as Myanmar police in corrupting and conspiring with government. Ko Shoo Ko Pat...
Jul 25, 2015 03:24 PM
Jul 25, 2015 04:26 AM
Jul 25, 2015 04:08 AM
Those kind of policetricks are no more popular or strange. In police hand, whatever they could create. That kind of evidences are not trustable. Too strong evidence is too untrustable.
Jul 25, 2015 12:21 AM